Maxaa ka soo kordhay Wararka Thomas Lemar la xiriirinaya Kooxda Arsenal? – Gool FM
(London) 25 Jan 2020. Kooxda Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay wadahadallo kula jirto kooxda Atletico Madrid si ay kaga wada xaajooodaan suurta galnimadda kaga soo iibsan karaan garab weerarka reer France ee Thomas Lemar.
Gunners ayaa si xooggan loola xiriirinayay xiddiga reer France tan iyo bilowgii suuqa kala iibsiga ee Janaayo, laakiin wararka ka imaanaya gudaha dalka Spain ay timaamaya in labada kooxood ay waqti horeba wadahadalka sii bilaabeen.
Sida uu warinayo Warsidaha RMC Sport, Kooxda uu hoggaamiyo Mikel Arteta ayaa wadahadallo kula jirta Naadiga Atletico si kaga soo qaataan 24-sano jirkaan, kaasoo ku guuldarreystay inuu gool dhaliyo ama caawiyo 21 kulan oo uu u saftay kooxdiisa Isbaanishka ah intii lagu jiray xilli ciyaareedkii 2019-20.
Si kastaba ha noqotee, warbixinta ayaa sheegaysa in labada dhinac ay xoogaa ku kala duwan yihiin dhanka lacagta uu joogo xiddigan, halka sidoo kale la tilmaamayo inay Arsenal isku dayeynin inay heshiis shaqsi ah la gaarto Weeraryahankan.
Lemar ayaa u saftay xulka France 22 jeer oo qura xilli uu u dhaliyay saddex gool, halka uu u sameyey lix gool caawin 64 kulan oo uu u saftay kooxda uu maamulo Diego Simeone tan iyo markii uu kaga soo biiray kooxda reer France ee Monaco bishii July sanadkii 2018-kii.
Weeraryahankan ayaa qandaraaska uu kula jiro kooxda ku ciyaarta Wanda Metropolitano uu gaarayaa illaa dhamaadka fasal ciyaareedka 2022-23.